Izindlela Ezingama-20 Zokuthola Ukulinganiswa Kwakho Okuqukethwe Kungcono Kunembangi Yakho | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 11, 2016 ULwesibili, April 12, 2016 Douglas Karr
Kuyangimangaza ukuthi zingakanani izinkampani ezisebenza kanzima ezifaka isu lokuqukethwe ngaphandle kokubheka amasayithi namakhasi ancintisanayo. Angiqondile izimbangi zebhizinisi, ngiqonde izimbangi zokusesha eziphilayo. Kusetshenziswa ithuluzi elifana ne-Semrush, inkampani ingenza kalula ukuhlaziywa okuncintisanayo phakathi kwesiza sayo nesiza esincintisanayo ukuthola ukuthi yimaphi amagama ashayela ithrafikhi kumncintiswano okufanele, esikhundleni salokho, aholele kusayithi labo.
Ngenkathi iningi lenu kungenzeka licabanga ukuxhuma emuva kufanele kube isu, angivumelani. Ngenkathi i-backlinking ingahle ibangele amazinga aphezulu esikhathi esifushane, inkinga ukuthi okuqukethwe okungcono izohlala iwina ngokuhamba kwesikhathi. Inhloso yakho kufanele kube ukudala okuqukethwe okungcono kakhulu kunalokho okushicilelwe yisiza esincintisanayo. Uma wenza umsebenzi ongcono kunabo, uzokwenza uthole izixhumanisi ngale kwalokho ongakulawula ngesandla.
URoss Hudgens weSiege Media unokuthunyelwe okuningiliziwe ku- ungayandisa kanjani ithrafikhi yewebhusayithi ngokuvakashelwa okungu-250,000+ njalo ngenyanga nge-infographic yokuthi ungakubeka kanjani kangcono okuqukethwe kangcono. Ngokwami, angikhathali kangako ngokuthola amathani ezivakashi kusayithi njengoba ngenza ngezivakashi ezisezingeni ezizobhalisa, zibuye, futhi ziguqulwe. Kepha i-infographic iyinqwaba yegolide ngoba ichaza ukuthi ungakubeka kanjani kangcono okuqukethwe kwakho. Leli isu esilihambisa ngaso sonke isikhathi kumasu ethu wokuqukethwe namakhasimende.
Ungakubeka Kanjani Okungcono Okuqukethwe
Thumela i-Slug - hlela i-post slug yakho bese wenza i-URL yakho ibe mfushane. Qaphela ukuthi le URL yisizinda sethu ngokungeziwe ku- kanjani-ukukala-okuqukethwe okungcono, i-URL elula, engakhohlakali abasebenzisi be-injini yokusesha bazokwazi ukuchofoza futhi babelane ngayo.
Izinhlobo Zokuqukethwe - umsindo, ihluzo, ukugqwayiza, okuqukethwe okusebenzisanayo, ividiyo… noma yini ongayenza eyenza okuqukethwe kwakho kugqame futhi ikwazi ukuhlukaniseka kalula kuzonaka kakhulu. Kuyinto kungani sithanda futhi sikhula ihluzo ezincane ezilinganiselwe ezokuxhum.
Isihloko sekhasi - Ukusebenzisa amagama angukhiye kubalulekile, kepha ukudala isihloko esifanele ukuchofoza kuyisu elihle. Sivame ukushicilela isihloko sekhasi esihlukile kunesihloko se-athikili, esenzelwe ngokukhethekile ukusesha. Uyacelwa ukuthi ungabanjisi abasebenzisi bosesho abanezihloko ezingafanelekile, noma kunjalo. Uzolahlekelwa ukwethembeka nezivakashi zakho.
Ukubhala Okulula - Sigwema amagama alukhuni kanye nama-akhronimi ngangokunokwenzeka - ngaphandle uma sifaka izincazelo nezincazelo zazo ukusiza izivakashi zethu. Asizami ukuwina umklomelo wombhalo ngokuqukethwe kwethu, sizama ukwenza izihloko eziyinkimbinkimbi ukuthi ziqondakale kalula. Ukukhuluma ngezinga isivakashi ngasinye esingaqonda ngalo kubalulekile.
Ukwakheka Kwekhasi - Okuqukethwe okukleliswe kuqala kube nezinhlu ezinamachashazi ezingama-78% zesikhathi. Ukuhlela ikhasi lakho libe yizingxenye ezithwebula kalula kuvumela abafundi ukuthi baliqonde kalula. Abafundi bathanda uhlu ngoba bayacwaninga futhi bangakhumbula kalula noma bamake izinto abazidingayo noma abazinakile.
Amafonti afundekayo - Ukulungisa usayizi wefonti yakho maqondana nedivayisi kubalulekile kulezi zinsuku. Izinqumo zesikrini ziphindaphindeka njalo eminyakeni embalwa, ngakho-ke amafonti aya ngokuya eba mancane futhi amancane. Amehlo wabafundi akhathele, ngakho-ke thatha kalula kubo futhi ugcine amafonti akho emakhulu. Usayizi wefonti omaphakathi wesilinganiso sekhasi # 1 ngu-15.8px
Izikhathi Zokulayisha Ngokushesha - Akukho okubulala okuqukethwe kwakho njengezikhathi zokulayisha ezihamba kancane. Kukhona ithani le- izinto ezithinta isivinini sekhasi lakho, futhi kufanele uhlale ulwela ukuthola izikhathi ezisheshayo nezisheshayo zokulayisha.
Ukubukwa - Isilinganiso se-athikili esimaphakathi okokuqala sinezithombe eziyi-9 ngaphakathi kwekhasi ngakho kufaka izithombe, imidwebo, namashadi acindezelayo futhi okwabelwana ngawo kubalulekile.
Ama ifotho - Ukubamba izithombe ezifanayo zesitoko njengamanye amasayithi ayinkulungwane akusizi ukudala umyalezo ohlukile. Uma senza umthwebuli wezithombe zethu ukuba ashuthe nezinkampani esisebenza nazo, nathi kufanele bathathe ikhulu noma bakhombise isibhamu bezungeza ihhovisi nokwakha. Sifuna izithombe eziphoqayo ezihlukanisa iklayenti nabancintisana nabo. Izithombe ezisezingeni eliphakeme zithola amasheya angama-121% ngaphezulu
Izinkinobho Zokwabelana Ezintantayo - ukudala okuqukethwe okuhle akwanele uma ungenzi kube lula ukuthi lokho okuqukethwe kwabelwane ngakho. Sikwenza kube lula ngezinkinobho eziklanyelwe ngakwesobunxele, ekuqaleni, nasekupheleni kwayo yonke into yokuqukethwe. Futhi kuyasebenza!
infographics - Izikrini ezinkulu zifuna izithombe ezinhle, ezinkulu noma ama-infographics ajabulisayo. Asikhiqizi imininingwane ebanzi ngoba kunzima ukuwabelana kwamanye amasayithi. Ukukhiqiza i-infographics emangalisayo ezinde futhi ezibukwayo kakhulu zisisiza ukuba sihehe, sichaze futhi siguqule izivakashi eziningi.
Links - Izincwadi eziningi zigwema izixhumanisi eziphumayo ngazo zonke izindlela futhi ngikholwa ukuthi iphutha lelo. Okokuqala, ukuhlinzeka ngesixhumanisi kokuqukethwe okubalulekile okudingwa yizithameli zakho kukhuphula inani lakho njengomphathi kanye nochwepheshe kubo. Kubonisa ukuthi unaka futhi uyakwazisa okuqukethwe okuhle. Okwesibili, ngama-algorithms abuyekeziwe kusesho, asibonanga ukwehla egunyeni lethu ngamathani ezixhumanisi eziphumayo.
Ubude bokuqukethwe - Siyaqhubeka nokusunduza ababhali bethu ukuthola izindatshana ezichazayo, ezakhayo ngezihloko. Singaqala ngamaphuzu wezinhlamvu ezilula ukuze umfundi askene bese esebenzisa izihlokwana ukwahlukanisa amakhasi abe yizigaba. Siyafafaza eqinile futhi okugcizelelayo ukusetshenziswa kwethegi kuyo yonke indawo ukuze kuthathwe ukunakwa kwabafundi.
Yabelana Ngomphakathi - Asivele sabelane ngokuqukethwe kwethu kanye, sabelana ngokuqukethwe kwethu izikhathi eziningi kuziteshi zethu zenhlalo. Imithombo yezokuxhumana ifana nethikha lapho abantu bavame ukuthola khona ngesikhathi sangempela. Uma ushicilele i-athikili ngaphandle kwesikhathi umlandeli asinakile, usulahlekile.
Hlanganisa Okuqukethwe Kwakho - Ingxenye enkulu yezilaleli zethu ngabantu abangavamisile ukungena engosini yethu - kepha bafunda incwadi yethu yezindaba noma baphendula inqwaba yezindaba abazithole zithakazelisa. Ngaphandle kwencwadi yezindaba noma inkampani yezobudlelwano bomphakathi ecindezela okuqukethwe kwethu kuzithameli ezifanele, besingeke sabelane ngakho okuningi. Uma kungukuthi sabiwe, asixhunywa. Uma singaxhunyaniswa, ngeke sikleliswe.
Ungakubeka Kanjani Okuqukethwe NGISHO Ngcono
Siyaluthanda lolu hlu, kepha sifuna ukwabelana ngezinto ezimbalwa ezinganakiwe kepha ezibucayi kakhulu:
Umbhali - Faka umbhali wakho kumakhasi akho. Njengoba abafundi befunda izindatshana futhi babelana ngazo, bafuna ukwazi ukuthi othile onolwazi wabhala le ndatshana. Ingcezu yokuqukethwe engenagunya ayihlukaniswa kangako njengombhali, isithombe, kanye ne-bio enikeza ukuthi kungani kufanele ilalelwe.
Amafomethi weselula - Uma ikhasi lakho lingafundeki kalula, njengoba kungaba ngefomethi ye-Google ye-Accelerated Mobile Page (AMP), cishe ngeke ulinganiswe nosesho lweselula. Futhi ukuseshwa kwamaselula kuyanda kakhulu.
Ucwaningo oluyinhloko - uma inkampani yakho inedatha yomkhakha wokuphathelene engabaluleka kumathemba akho, yimba bese unikeza ukuhlaziywa komphakathi. Ucwaningo oluyinhloko luyigolide futhi kwabiwa ngalo njalo ku-inthanethi. Isikhathi esifushane, idatha eyiqiniso ifunwa kakhulu yimibhalo yezimboni, abanikeli bososayensi, kanye nabancintisana nabo.
Ucwaningo Lwesibili Olukhethiwe - bheka phansi kwalesi infographic futhi uzothola ukuthi benze ucwaningo lwabo - bathola imithombo engaphezu kweshumi nambili yocwaningo oluyisisekelo oludweba isithombe esicacile salokho okudingekayo okufeziwe. Kwesinye isikhathi ukuhlela nje nokukhipha igolide kunikeza lonke ulwazi amathemba akho alifunayo.
Khokhela Iphromoshini - Ukukhangisa okukhokhelwayo okukhokhelwayo, ukukhushulwa komphakathi okukhokhelwayo, ubudlelwano bomphakathi, ukukhangisa komdabu… konke lokhu kuyizimali eziqinile, ezihlosiwe, kulezi zinsuku. Uma ubhekene nenkinga yokwakha okuqukethwe okuhle - kungcono ube nesabelomali esisele ukukuphromotha!
Tags: ubude bokuqukethweusayizi wefontiizithombeukuxhumanisaI-Marketing Infographicsukusesha okuphilayousezingeni lokusesha le-organicizixhumanisi eziphumayoisihloko sekhasiIzithombeiposi slugisikhundlaseoisihloko se-seoshare izinkinobhoi-url
Isevisi Yamakhasimende Engalungile Iyalimaza I-ROI Yakho Yokumaketha
Ngo-Apr 12, i-2016 ku-10: i-18 PM
Ngempela Iposi Elikhulu. ngithanda i-infographic ukuthi kufanele siyakhe kanjani i-UI yoMkhiqizo.
Ngo-Apr 15, i-2016 ku-4: i-24 PM
Thanda le ndatshana uDougie! imininingwane efanelekile 🙂
Ngo-Apr 16, i-2016 ku-1: i-34 PM
May 4, 2016 ku-4: 04 PM
Ngokwengxenye enkulu imininingwane eyisisekelo, kepha ebaluleke ngempela. Siyabonga ngokusikhumbuza okubucayi.
Okunye okungeziwe ukukhumbula ukwenza izihloko zakho zibe nemizwa. Khumbula ukuthi ungubani umakethe wakho ohlosiwe futhi ubhekane namaphoyinti abo obuhlungu ngesikhalazo esingokomzwelo.
May 4, 2016 ku-9: 13 PM
Impendulo enhle Mina no-Annie siyavumelana ngokuphelele! Ukuthinta imizwa kuyindlela enamandla yokukhuthaza umfundi wakho.